အာဖရိက၏ကပ်ဘေးရှစ် - Afrikhepri ရံပုံငွေ
အဆိုပါအာဖရိကသည် Patrice Lumumba ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး El Gueddafi ၏ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာလှည့်လည်သွားလာနေသည်။ လူ ဦး ရေ ၁ ဘီလီယံရှိပြီးလူ ဦး ရေ ၁ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးလူ ဦး ရေသန်း ၆၀၀ နီးပါးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိနိုင်သည့်မြေပြန့်ဒေသများဖြစ်သည်။ ဆိုမာလီယာသည်တစ်နှစ်အတွင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုအမေရိကန်တစ်ပတ်အတွင်းသုံးစွဲသည်ကိုသတိရပါ။ သို့တိုင်အာဖရိကသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိသော်လည်း Sarkozy ၏ရေးသားချက်အရ“ ၎င်း၏ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်မှာသမိုင်းကိုမဖော်ဆောင်နိုင်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာဖရိကရဲ့အတိတ်ကိုဟီဂယ်လ်နဲ့ဗစ်တာဟူဂိုတို့ကဂုဏ်မတင်ခဲ့ကြဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သူတို့သည်သာလွန်လူမျိုးတို့၏အတွေးအခေါ်နှင့်ဂျူလီကူးတို့ချစ်ခင်ရသောယဉ်ကျေးမှု၏တာဝန်ကိုအခြေစိုက်စခန်းပေးခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတာကတော့ ၁၈၈၅ ခုနှစ်ဘာလင်ကွန်ဖရင့်မှာအာဖရိကရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းမှုဟာဘယ်လ်ဂျီယံဘုရင်ကိုခွဲခြားထားတဲ့မြစ်ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာသူ့ကွန်ဂို - လက်ရှိကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဆွဲဆောင်သည့်ပြင်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများကရန်လိုနေသူများကိုကူညီခဲ့သည်။ ကျနော်တို့, အောက်ပါအရာ၌, ရှစ် purulent ဒဏ်ရာစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်။
အာဖရိက၏မကောင်းမှုအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အစာခေါင်းပါးခြင်းနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအတွက်နှစ်စဉ်သောင်းနှင့်ချီသောသူတို့သည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့်သေဆုံးကြပြီးအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းမှခံစားကြရသည်။ ပြောင်းဖူးမှပြောင်းဖူးမှထုတ်လုပ်လိုက်သောဇီဝလောင်စာ ၄ × ၄ သည် Sahelian ကိုတစ်နှစ်ခန့်အစာကျွေးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်နီးပါးရေးသားခဲ့သည် Claire Brisset ကအေအိုင်ဒီအက်စ်သည်သေစေနိုင်သောရောဂါဟုယူဆခဲ့သည် မဖြစ်နိုင်သောထွက်ပေါက်နှင့်အတူ။ (…) သို့သော်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင်ကွင်းကျယ်သည်မညီမျှမှုကိုထင်ရှားစေသည်။ ပထဝီအနေအထားအရမညီမျှမှုများသည်အမည်းရောင်တိုက်ကြီးရှိအချို့သောနိုင်ငံများနှင့်မျိုးဆက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်အခြားနိုင်ငံများ၌တိုးတက်မှုများရှိသော်လည်းထိုတူညီသောနိုင်ငံများ၏ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိကတွင်အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာနောက်ကျကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။ (…) မစ္စတာစီဒီ၏အဆိုအရဤနှောင့်နှေးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းအာဖရိကမှသတ္တုတွင်းလုပ်သားများရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းကြောင့်ပြန့်နှံ့နေသောကပ်ရောဂါ၏သမိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (.. ) အကြမ်းဖက်မှုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ပြည်တွင်းပunိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု။ ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုလူ့အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ယူမှတ်ရမည်။ သာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြasနာအဖြစ်။ " (၁)
ကျနော်တို့မြေယာသိမ်းပိုက်၏ယခင်အလှူငွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ပြီးသားဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများတွင်အသုံးပြုထားသည့်စွမ်းအင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော coltran အဖြစ်ရှားပါးသတ္တုများ (ကွန်ပျူတာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ ... ) အပါအဝင်အာဖရိက၏မြေဆီလွှာနှင့် subsoil ၏ကုန်ကြမ်း၏လုယူလူသိများ။ ဒါဟာပါသောလူရိုင်းအမျိုးအနွယ်၏သိမျးပိုကျနဲ့တရားဟောကွား၏ပွညျ၌ ပို. ဆင်းသမိုင်းလိပ်စာများထက်အခုအသစ်ရယူထားသောသည်ဤအရပ်ဘက်အပေါ်အလွန် discrete အနောက်တိုင်းနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများမှာဥပဒေသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမပါဘဲကြားခံမှတဆင့် coltran အဆတရာသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းရောင်း သေချာပေါက်ကို "သုံး CS" ၏ကိုယ်စားယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ထိခိုက်ရလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း, အူမကြီး။ နိုင်ငံခြားနှင့်နိုင်ငံစုံစတိတ်ခြင်းဖြင့်အာဖရိကမှာ ( ... ) ကိုဖမ်းဆုပ်လယ်ယာမြေထပ်တလဲလဲအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာ့လူမှုဖိုရမ်မှာ Dakar ကိုဖေဖော်ဝါရီလ 2011, ထိုအန်ဂျီအို ActionAid အတွက်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ (2)
ငါးဆယ်နှစ်ကြာပြီးနောက်အာဖရိကနေဆဲထွက်ရောက်ရှိ။ ဒါဟာသဘာဝက, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျား၏နှစ်ဦးစလုံး, ရှိသမျှဘေးများ၏တိုက်ကြီးဖြစ်သည်။ ဝိရောဓိ, က ပို. ပို. အမျိုးမျိုးကုန်ကြမ်းများရှားပါးမှုများကမှတ်သားတစ်ဦးအခြေအနေတွင်ဤတိုင်းပြည်၏စည်းစိမ်ကိုကြေညာဖို့ရပ်တန့်မထားဘူး။ သို့သော်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းစွမ်းအင်နှင့်ယခင်ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံ (ဗြိတိန်, ပြင်သစ်, နှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, ပေါ်တူဂီရန်) အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့လုယူရာဥစ္စာကိုလွှတ်ချင်ပါဘူး။ ကြောင်းအိမ်မှာခြေစွပ်ကနေအာဖရိကစီမံခန့်ခွဲရန်, ဒါပေမယ့်လည်းတရုတ် - Africom - သင်တန်း၏အနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားနယူးနိုင်ငံများနှင့်မညီညွတ်သော command တစ်ခုခြင်းဖြင့်အထူးသဖြင့်လိုအပ်သောအမေရိကန်, ပါဝင်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီန်းကျင်2ဘီလီယံအထိဖြစ်သည့်ပါဝါအပျော့ထည်, အိန္ဒိယနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတစ်မဟာဗျူဟာ။ သူကပြောပါတယ်, ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအတွက်ဂျီဒီပီ၏ 0,7% မှာသတ်မှတ်ထားဒီဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ၏အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီဖူး။ ထို့အပြင်စီတိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်သီးသန့်ဝယ်ယူမှအကူအညီဒီအသုံးအနှုန်းအောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောပရဟိတလုပ်ငန်း amalgamating နေချိန်မှာကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။
ပြင်သစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ၌ဤဧရိယာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်များအတွက်လိမ့်မည် "( ... ): ကျနော်တို့ဂျပန်အာဖရိကမှာစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်သစ်၏" လက်နက်ကိုင်တောင်ပံ 'ရှာသောဤအခြေအနေတွင်သင်ယူကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသားများကိုပျက်စီးရသောခုနှစ်တွင် Amenas ၏မကြာသေးမီဓားစာခံ-ဆည်းပူးနေ, အကယ်စင်စစ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီများပြည်မဝင်ရောက်၎င်းတို့၏တွန့်ဆုတ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်သတိပေးလာသေး၏။ "ပြင်သစ်နှင့်ဂျပန်အာဖရိကမှာဘုံအကျိုးစီးပွားရှိသည်: တိုက်ကြီးတည်ငြိမ်သည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ( ... ) နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးမိတ်ဖက်, ဖြစ်လာသည်။ ပြင်သစ်ဒေသခံအသိပညာရှိသည်နှင့်အချို့သော Francophone နိုင်ငံများတွင်အာဖရိကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကောင်းစွာဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကြီးစိုးတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, ကအဲဒီမှာတပ်တွေနှင့်စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများရှိပါတယ်။ ဂျပန်, သို့သော်, AQIM [အစ္စလာမ့်ထွန်းအတွက်အယ်လ်ကိုင်းဒါး] တူသောအုပ်စုများအကြောင်းကိုနည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ "(3)
၎င်း၏အထူးသ Lucid နှင့်အတူ, AiméCésaireပထမဦးဆုံးလျှင်မလွန်လွတ်လပ်ရေးအာဖရိကအကြောင်းပြောဆိုရန်ပထမဦးဆုံးတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ "အာဖရိက၏ရန်သူကြီးအောင်မြင်မှုကသူ၏စိတျအပိုငျး, Frantz Fanon အဘို့ရေးထား, က c '" လွတ်လပ်ရေးများအတွက်ရုန်းကန်အဖြစ်ဆိုးကြောင်းမော်ကွန်း, ရရှိခဲ့လွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ": သူကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရေးသားခဲ့သည် အဆိုပါအာဖရိကန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဖျက်ကြပြီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါ alternative အဓိကရုဏ်းသို့မဟုတ်ရောဂါအားဖြင့်ဖြစ်စေ, အာဖရိက၌ပြစ်မှားမိသည်။ အတိအကျ, အာဖရိက၏အကြီးအကံမကောင်း၏တဦးတည်းလည်း၎င်းတို့၏ယခင်သခင်အားဖြင့်နိုက်ခံရပညာရှိတို့ကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူ, သူတို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးရှည်တဲ့သူခေါင်းဆောင်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပါဝါ၏ပျှမ်းမျှဖမ်းဆီးရမိမကြာခဏဆယ်နှစ်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစွမ်းထက်သွားသည့်အခါလက်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏အကျိုးအတွက်အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအာဖရိကအခြားသူတွေအလုပ်လုပ်ဘယ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုဝေးလံသော servo ပုံစံဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မိမိကိုမိမိကိုထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကကျိန်စာလား?
ထိုစကားလုံးပျံ့နှံ့! အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အသစ်သောထွန်းသစ်စနိုင်ငံများပင်ဟောင်းနွမ်းသောနိုင်ငံများအားပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မငြိမ်သက်မှုများရှိသည်။ လုယက်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုထားပြီးလူ့အခွင့်အရေး၏ကြွေးကြော်သံများသာဖြစ်သည်။ နီကိုလိုနီဝါဒကြောင့်အာဖရိက၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှမှုများကိုHervé Amani လူမှုဗေဒပညာရှင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်နိုင်ငံများ၏လုပ်ရပ်များသည်ကွဲပြားပြီးမသက်ဆိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဆိုပါက” N'Krumah ကခန့်မှန်းသည်။ (…) N'Krumah သည်သူ၏ရွယ်တူချင်းများနောက်သို့မလိုက်ခဲ့ပါ။ အာဖရိက၏အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာအာဏာသက်တမ်းရှည်သောအစိုးရခေါင်းဆောင်များသည်ကျဉ်းမြောင်းသောအမျိုးသားရေးဝါဒကိုဟောပြောပြီးကွဲပြားခြင်းနတ်ဆိုးများနောက်လိုက်ခဲ့သည်။ (၄)
"N'Krumah မိန့်ခွန်းပြောပြီးအနှစ် ၅၀ အကြာ ၂၀၁၃ မှာအာဖရိကသမဂ္ဂဟာအခုထိဖွဲ့စည်းနေဆဲပါ။ " ထို့နောက်Hervé Amani သည်အာဖရိကတိုက်မှခံစားခဲ့ရသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့သည်။ “ တိုဂိုမှအိုလံပစ်၊ ဗိုလတာတွင်Yaméogo၊ ဘီနင်ရှိAhomadégbé, နိုင်ဂျာရှိ Hamani Diori၊ မာလီရှိ Modibo Kéïta (ဓာတ်ပုံ)၊ Sankara လုပ်ကြံခံရခြင်းဖြစ်သည်။ N'Krumah ပြီးနောက်သူတို့၏နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်သောအာဖရိကဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်သည့်သူတို့၏ရာဇ ၀ တ်မှု ဗိုလ်မှူးကြီးကဒါဖီသည်အာဖရိကသမဂ္ဂကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မဆုတ်မနစ်ဗိသုကာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် N'Krumah အကြံပြုထားသည့်အဓိကစီမံကိန်းများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပြည်သူများကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၏မလိုလားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများကဤလမ်းညွှန်ကိုလုပ်ကြံခဲ့သည်။ N'Krumah ၏အာဖရိကစည်းလုံးညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည့်ထိုအချိန်ကခေါင်းဆောင်များထဲတွင်ကုတ်အိုင်ဗွီနိုင်ငံမှသမ္မတဟူးဖော့ဘ်နီလည်းပါဝင်သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုပါပဲ။ ၎င်း၏သက်တမ်းသည်ဆက်တိုက်ကိုလိုနီအင်အားစုများ၏ကျွန်ဖြစ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ (…)” (၄)
“ ကဒါဖီ၊ ဂက်ဘိုဘို၊ နူကူရာတို့မှာဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ ၀ မ်းသာမယ်ဆိုရင်ရက်ရက်စက်စက်မှားယွင်းနေတယ်။ ၀ န်ထမ်းများ၏စစ်အင်အားဖြင့်လေထီးခုန်ခြင်းသည်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာနှင့်ပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သာဆောင်ရွက်သည်။ စာရေးသူကနိဂုံးချုပ်သည် -“ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်အဆုံးသတ်ဖို့လိုတယ်။ သို့သော်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည်နယ်ချဲ့ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။ ထပ်မံ၍ ထပ်မံ၍ ပြောကြပါစို့။ “ အနောက်တိုင်းသားများ၏လုပ်ရပ်များသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မသက်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောနည်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားလိမ့်မည်” (N'Krumah) ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဤသည်၌, အနောက်နိုင်ငံတွေအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်နှစ်ခုလျင်မြန်စွာအရေးယူတပ်ဖွဲ့များပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်။ ပြင်သစ်-အာဖရိက၏အမြင့်မှာပြင်သစ်သမ္မတ Francois Hollande ပြင်သစ်အမြဲသူတို့ရဲ့အနားမှာရှိလိမ့်မည် "ပေမယ့်," ကမနက်ဖြန်, တိုက်ကြီး၏လုံခြုံရေးသေချာစေရန်မည်သူသည်အာဖရိကန်ဖြစ်ပါတယ် "လို့သတိပေး, zerda ရန်ဖိတ်ခေါ် ။ "(4)
အာဖရိကကနေတရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးစီးဆင်းမှုအတွက်ဘီလျံခန့် 1980 နှင့် 2009 အကြား, 1 350 နွေရာသီပြည်ပမှာပြောင်းရွှေ့ရှိသည်။ ADB က, မြောက်အာဖရိကတို့ကတစ်ဦးအစီရင်ခံစာသည်ဤကာလအတွင်းတရားမဝင်လွှဲပြောင်းအတွက် 415,6 ဘီလီယံအထိစုစုပေါင်းသည်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းဒေသ, အဓိကအားဖြင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌အတွက်သက်ဆိုင်ရာကဤအကျိုးရလဒ်များလိမ်လည်ပိုက်ဆံဒုတိယနောက်တော်သို့လိုက် အယ်လ်ဂျီးရီးယား, ပြီးတော့လစ်ဗျားတို့ကအနေအထား။ ငွေကိုအများအားဖြင့်, အခွန်ဟေဗန်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်လိမ်လည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်။ Mthuli Ncube, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ဒုတိယသမ္မတနှင့်အညီ "နောက်ဆုံးသုံးဆယ်နှစ်အတွင်းအာဖရိကထဲကအရင်းအမြစ်များအဆိုပါလေယာဉ်, အာဖရိက၏လက်ရှိဂျီဒီပီအကြောင်းကို, ထိုတိုက်ကြီးများ၏ takeoff hampers" ။ "ဒီသမားရိုးကျသည်ပညာကိုအမြဲတမ်းအနောက်ပြန်လာအတွက်အများကြီးလက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘဲ, နိုင်ငံခြားအကူအညီနှင့်ပုဂ္ဂလိကအရင်းအနှီး၏အခြားစီးဆင်းမှုမှတစ်ဆင့်အာဖရိကမှာပိုက်ဆံထိုးကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်ခြင်ခြင်းပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေး: အာဖရိကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူတစ်ဦးအသားတင်မြီရှင်အနေအထားဖြစ်ပါတယ် "ဟုရေမွန် Baker ကဝါရှင်တန်အခြေစိုက်သုတေသနစင်တာဒါရိုက်တာတစ်ဦးနှင့် GFI ကာကွယ်ရေး, ကပြောပါတယ်။ (; .. ) (5)
ဥပမာအားဖြင့်, အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတိအကျသိပ္ပံနည်းကျဖြစ်လာသည်။ များများလေလေပျံလေလေ၊ ငါတို့ကမီးလင်းသမားတွေရဲ့ကင်မရာမီးဖိုကြီးကိုငါတို့နားလည်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ငါးကြီးကအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပေးတဲ့ "ကော်မရှင်" ကြောင့်အရှုပ်တော်ပုံများကဲ့သို့ငါးကြီးများသည်နှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထက်ပိုပြီးအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်နေသည်။ သတင်း
ဤအရာအလုံးစုံကဲ့ရဲ့များ၏ရှေ့မှောက်၌, ထိုကျွန်တော်တို့အာဖရိကထင်? သြဒီနိတ်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးတို့အတွက်သနည်း အရည်အသွေးအဆေးဝါးနိုင်ရန်အတွက်? သူမသည် endogenous ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိုလေ့လာ? တိုက်ခိုက်နေသောထံမှလက်နက်များထောက်ပံ့သို့မဟုတ် Alternative ငြင်းဆန်သောသူအာဏာရှင်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် left ခံရဖို့ကိုတောင်းဆိုပါသလား? ဒါတွေကိုသူမတစ်ဦး Rapid Action တပ်ဖွဲ့တည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် !! အနောက်တိုင်းလက်နက်များရုံဟုအမည်ပေးထားသောအာဏာရှင်တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ကပြောပါတယ်သည့်အခါဝါကျ Chirac အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်လာသည်နှင့်အတူ: "ကျနော်တို့ကအာဏာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်, မဟုတ်ရင်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲအလိုမရှိ" အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောသမျှရလဒ် အဓိကအရာသူတို့စောင့်ရှောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ rantings ရှေ့ဆက်ကောင်းသောအချိန်များရှိသည်။ တစ်ဦးထောင်ပြီးဓားကို '' နှင့်အတူအာဖရိက "Colossus ပြင်သစ်အပေါ်လုပ်ပါတယ်လျင်မြန်စွာအရေးယူအင်အားသုံးလိုသည်။ ကိုအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများက၏ cacophony, ပြင်သစ်ကိုယ်စား CADD docilisant အဖှဲ့အစညျးမှာ operetta ၏သမ္မတစည်းလုံးသတိရကြကုန်အံ့။ "Addis Ababa အတွက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်တွေ့ဆုံအာဖရိကခေါင်းဆောင်များသည်အာဖရိကတိုက်အပေါ်ပဋိပက္ခများအတွက်ကြားဝင်တစ်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုအင်အားကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အာဖရိကသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ " (6)
မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုနောက်တဖန်မသတ်ရ။ ၎င်းသည်မြေကြီးနှင့်ပတ်သက်သောသူကပြောတယ်၊ ၎င်းသည်ခေါင်းကိုက်။ ပျံသန်းခြင်းပေါ်လစီ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးအာဏာနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်မည်သူသေဆုံးသနည်း။
အဆိုပါစေအာဖရိကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဖရိကအပြည့်အဝကြောင်းကုန်ကြမ်းများရှားပါးမှုနှင့်အသစ်ကစားသမားပေါ်ပေါက်ရေး၏အဟောင်းကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၏ငြိမ်းချမ်းရေးလူသိများဘယ်တော့မှထားပြီးဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ကာလအတွင်းတစ်ဦးတကယ်တော့ဒါဟာဖြစ်ပါသည် သူမငြင်းဆန်မရနိုငျသောအာဖရိကအဆိုပြုချက်။ အထူးသဖြင့်ကြောင့်အာဖရိကအစုလိုက်ရောဂါ၏စီးပွားရေးဒုက္ခသည်များအကျိုးဆက်အပြီးအစဉ်အမြဲစစ်ပွဲများနိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များအကျိုးဆက်များပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမချီတက်ပွဲများနှင့်အကြောင်း, ရှိပြီးသောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏လမ်း လွဲ. ဖို့အနာဂတ်များ၏ပဋိပက္ခများ, ငါတို့သည်တွေထဲမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်းသေဖို့ကိုဆက်လက်မပေးလျှင်သွားရရန်ရှိသည်မည်သူ ပို. ပို. ရာသီဥတုဒုက္ခသည်များရှိသည်။
ထို့အပြင်အချို့ဒေသများရှိလူ ဦး ရေစာရင်းအရရေအရင်းအမြစ်များခြောက်သွေ့သွားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ နောက်ရေစစ်ပွဲသည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ကျရောက်နေပြီးနိုင်းလ်မြစ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ ပုန်းအောင်းနေသည့်ပconflictိပက္ခဖြစ်သည်
"အီသီယိုးပီး, ကင်ညာ, ယူဂန်ဒါ, ဘူရွန်ဒီ, ရဝမ်ဒါနှင့်တန်ဇန်းနီးယား 2010 ကတည်းက, မြစ်ရေသည်စာချုပ်အသစ်ခွဲဝေမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုစာသားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့အီဂျစ်နဲ့ဆူဒန်တို့ကပြင်ဆင် 1929, 1959 တစ်ဦးထံမှအစောပိုင်းကစာချုပ်ချိန်းတွေ့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး partition ကိုစာချုပ်မြစ်ရေအကြောင်းကို 90% ခံစားခဲ့ရတစ်ဦးတည်းသောအီဂျစ်နှင့်ဆူဒန်အတွက်ခြင်္သေ့ရဲ့ဝေစုကိုပေး၏။ ( ... ) အီသီယိုးပီးဧပြီလ 2011 ၌သူ၏ရန်းထောင်စုနှစ်ဆည်များ၏ site ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 5000 မဂ္ဂါဝပ်နီးပါး 63 ဘီလီယံအထိရေ m3 ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပထမဦးဆုံးအာဖရိကန်ရေကာတာဖြစ်လာထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မယ်။ ( ... ) "(7)
အဘယ်သူမျှမသဘောတူညီချက်သေးနိုင်းမြစ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အီဂျစ်, အီသီယိုးပီးနှင့်ဆူဒန်အကြားရောက်ရှိလျက်ရှိသည်စဉ်နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံခြားရေးရေးရာအီဂျစ်ဝန်ကြီးဌာနအဲသယောပိသံအမတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်။ အလုပ်အင်္ဂါနေ့ 28 မေလတွင်စတင် အဆိုပါရေကာတာ 3,2 ဘီလီယံခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးခြောက်သွေ့သောလိုအပ်ပါတယ်နှင့်အပြာရောင်နိုင်းမြစ်၏သဘာဝအိပ်ရာလွှဲ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြီးသား, အီဂျစ်နှင့်အီသီယိုးပီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်နိုင်ငံစလုံးအဘို့ဤအရေးပါကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမြက်စားပါပြီ။ (8)
ICC လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိပါသလား အာဖရိကတိုက်၏အစွမ်းထက်သောအရာများသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ The Hague တွင်သူတို့၏နေ့ရက်များအဆုံးသတ်သွားမည်ကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့နေရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်ခုံရုံး (ICC) သည်အာဖရိကလူမျိုးများကိုသာတရားစွဲဆိုခြင်းဖြင့်လူမျိုးရေးအမဲလိုက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ UA)၊ အီသီယိုးပီးယား ၀ န်ကြီးချုပ် Hailemariam Desalegn ။ အများစုမှာရောမစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသောထိုနိုင်ငံများမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ဘေးဆိုးဆိုးဆိုးဝါးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာအမိန့်ချမှတ်ရန်အနောက်နိုင်ငံများကထူထောင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့်လူ့အခွင့်အရေး၏နာမ၌မှိုမလိုက်သောသူတို့ကိုအပြစ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်မှန်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေးသည်…သတိပေးချက်အနေနှင့်အမေရိကန်သည် ICC ကိုဖန်တီးသည့်ရောမစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးပါ။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားကသူမကပဲအပြည့်အဝတိုက်ကြီးများ၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်ယူဆ 900 သန်းမှဖျက်သိမ်း, နာယကပါဝင်သည်။ ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်သလိုနိုင်ငံရေးမမျှမကစီးပွားရေးကိုမပြန်လာရှိလိမ့်မည်သောသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ဆုကြေးငွေကြေးဇူးမသိနဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်းဖြစ်ပါသည်, နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ 900 သန်းနှင့်အတူ။ ဤသည် 10 ထိပ်ဆုံးလူတန်းစားတက္ကသိုလ်များဖြစ်ပါတယ် ....
ပါမောက္ခ Chems Eddine Chitour
1 ။ ကို Claire Brisset http://www.monde-diplomatique.fr/2013/06/BRISSET/49201
2 ။ Chem Eddine Chitour: http://www.legrandsoir.info/l-afrique-nourrit-les-autres-le-grabbing-des-terres.html
3 ။ Emily Guyonnet, http://www.monde-diplomatique.fr/2013/06/GUYONNET/49208
4 ။ Herve Amani http://www.legrandsoir.info/50e-anniversaire-de-l-ua-l-unite-africaine-a-l-epreuve-des-africains.html 29 mai 2013
5 ။ မြောက်အာဖရိကမှာမြို့တော်ဒ Zhor Hadjam တရားမဝင်လွှဲပြောင်း။ အဆိုပါဒေါက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကိုအဲဂုတ္တုအယ်လ် Watan 30 05 2013 ။
6 ။ Addis Ababa နိုင်ငံများတွင်အာဖရိကသမဂ္ဂ၏ Aniss Z. ထိပ်သီးတစ်ဦးလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုအာဖရိကတပ်ဖွဲ့ဟာအယ်လ် Watan 28.05.2013 ချင်
7 ။ Gaëlle Laleix http://www.slateafrique.com/2161/tensions-eau-bassin-du-nil 29 05 2011
SOURCE မှ: http://www.mondialisation.ca/les-huit-plaies-de-lafrique-cinquante-ans-derrance/5337447